SAWIRO:- Dowladda Somlia oo howlahheeda maamul usamaynta kasii wada Galmudug xilli Ahlusunna wali ay qorsheyaal maleegeyso. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Guddoomiyaha guddiga farsamada maamul u dhisidda Galmudug ee ay Magacaawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa kormeerka ka dib ka warbixiyay howlaha horyaala guddiga iyo sida ay u wajahayaan soo xulista Baarlamaanka maamulka Galmudug.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay dadaal badan ku bixinay dhismaha Maamulka Galmudug, ayna ugu mahadcelinayaan doorkoodka garab istaaga ee wada hadalada,dib u heshiinta beelaha Maamulka Galmudug.
“Waa wax lagu farxo in reer Galmudug Fahmaan qiimaha Maamulka iyo Dowladnimada” ayuu hadlkiisa raaciyay Mar uu ka hadlaayay dadejinta Dhismaha Maamulka Galmudug ee Bartamaha Soomaaliya.
Cabdinaasir Geelle Cilmi Gudoomiyaha Guddiga Farsamada Dhismaha Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay maalmaha soo socda ay xaraynayaan Odayaasha dhaqanka beelaha Maamulka Galmudug oo haatan howlihiisu ay ka socdaan Magaalada Dhuusamareeb.
Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmudug ayaa waxaa ku wada sugan labo Guddi Doorasho oo ay kala magacaabeen Dowlada Soomaaliya iyo Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Sheekir, inkastoo Masuuliyiinta Ahlusunna ay sheegeen in ay arintaas wada hadal uu ugula socdo Dowlada Soomaaliya.
Previous articleCiidamadii ugu badnaa oo ka goostay Axmed Madoobe ayaa ku biiray Dowladda Somalia.
Next articleDIGNIIN:- Dowladda Somalia oo sheegtay in dhawaan ay curan doonaan Roobab buuxiya Wabiyada oo fartahaad horseedi kara.
Daawo Video:Shiine Akhyaar oo weeraray Farmaajo Iyo Khayre
marqaan - June 5, 2020 2